जापानको कोसेली। | Japan Info - नेपाली
Japan Info > Japan Info - नेपाली > FOOD > के हजुरको बकेट लिस्ट मा जापान छ? जापान आएर घर लानै पर्ने ५ कोसेली।
भनिन्छ नि “फुड मेक्स इभन अ स्याड पर्सन ह्याप्पी”। हुन पनि खानाले हरेकको मुखमा उज्यालो लिएर आउछ। अझ खाना को वर्ग मा पनि स्न्याक्सले त मुखमा पानी नै आउछ। मिठाई , पोटेटो चिप्स, फलफुल, चाऊचाऊ, दालमोठ नेपालको लोकप्रिय स्न्याक्समा पर्छन। आज म हजुरहरुलाई जापान को स्न्याक्स र जापान आएर घर फर्किदा लानु पर्ने ५ कोसेली को जानकारी गराउछु। जापान जती सुसी, तेंपुरा, रामेन, सोबा, याकितोरी र ओकोनोमियकिको लागि प्रसिद्ध छ त्यति नै मुख रसाउने, हेर्दा मन लोभ्याउने स्न्याक्सकोलागि पनि चिनिन्छ।
राम्रो कुरा के हो भने पपुलर स्न्याक्सहरु आफ्नो पोल्टामा पार्न हजुरहरु मल वा सुपरमार्केट चाहर्दै हिडीराख्नु पर्दैन। प्रमुख एरपोर्ट टोकियो नारिता, टोकियो हानेदा, कान्साई अन्तर्राष्ट्रियमा यी स्न्याक्स सजिलै पाइन्छन। आफ्नोलागि होस् वा आफ्नो परिवारको लागि यी स्न्याक्स जापानको सम्झनाको राम्रो कोसेली हुन्। हजुरहरुलाई आफ्नो लगेज ओभर वेट हुने पिर छ भने, यि स्न्याक्स एरपोर्टमा सेकुरिटी चेक इन पास गरे पछि पनि किन्न सकिन्छ। के के हुन् त ति ५ स्न्याक्स ?
१. सिरोई कोइबितोo
सिरोई कोइबितो को अंग्रेजी अर्थ हो “ह्वाईट लभर्स”। यो गुलियो स्न्याक्स जापानको होक्काइदो प्रान्तमा बनेको हो। यो दुइथरी को स्वादमा उपलब्ध हुन्छ। ह्वाइट चकलेट यसको ओरीजनल फ्लेभर हो। यो ब्ल्याक मिल्क चकलेट फ्लेभरमा पनि हुन्छ। यो स्न्याक्स दुइ बिस्किट बीचमा चकलेट क्रिमले भरिएको हुन्छ। बिस्किट चाहि बटर कुकिज जस्तै हुन्छ। चकलेट क्रिमको टिपिकल फ्लेभरनै र क्रिस्पी बिस्किटले नै सिरोई कोइबितो जापान आउने पर्यटक माझ सबैभन्दा लोकप्रिय कोसेली हो। यसलाई फ्रिजमा अलि चिसो बनाएर खान रुचाइन्छ।
पसलमा सिरोइकोइबितो तीन साइज १२ पिस, २४ पिस र ३६ पिसको प्याकेटमा पाइन्छ। यो होक्काइदोको फ़्याक्टरिबाट किन्दा सबै भन्दा सस्तो पर्छ। ड्युटी फ्री सपमा १२ पिसको ७०० एन र २४ पिसको १४०० एन जति पर्छ। सिरोइ कोइबितो यति लोकप्रिय छ कि यो अरु देशमा पनि बिक्रि गरिन्छ। मलेसिया र सिंगापुरमा मानिसहरु यो स्न्याक्स जापानको भन्दा दुइगुना मूल्य तिरेर पनि किन्छन। यदी हजुरहरु जापान आऊदा होक्काइदो पनि जानेहुनु भयो भने त्यहाँ रहेको सिरोई कोइबितो पार्क जान नछुटाउनु होला।
२. रोईस चकलेट
यो चकलेट जापानको दोस्रो लोकप्रिय कोसेली बन्न सक्ने अलि ” fancier ” स्न्याक्स हो। चकलेट पारखीहरुको लागि रोइस जापान को रिकमेण्डेड चकलेट हो। सन् १९८३ होक्काइदोमा जन्मिएको यो ब्रान्डको ब्रान्च अरु थुप्रै देशहरुमा पनि छ। रोइस चकलेटलाई अरु हाइ क्लास चकलेट ब्रान्ड जस्तै गोडिभा र lindt संग दाजिन्छ।
रोइसले धेरै प्रकारको चकलेट उत्पादन गर्छ। उसको मुख्य उत्पादनमा नामा चकलेट, चकलेट चिप्स, प्योर चकलेट, चकलेट वेफर र चकलेट बार पर्छन। यसमा पनि नामा चकलेट रोइसको सबैभन्दा बढी बिक्ने चकलेट हो। नामाको अर्थ काचो भएता पनि यो नामा चकलेट काचो भने हैन। यो निकै उच्च स्तरिय कोकोआ र क्रिमबाट बन्छ। एकदम सफ्ट हुने भएको यो फ्रेन्च ट्रफ़ल जस्तै नरम हुन्छ। यो नामा चकलेट पनि लिकर (रक्सि) भएको र नभएकोमा पाइन्छ। अनि यी दुई क्यटेगोरि भित्र थुप्रै फ्लेभरको छान्न सकिन्छ। माच्या ग्रीन टी , स्याम्पेन, बनाना, क्याल्भाडोस, स्ट्रबेरी केहि पपुलर फ्लेभर हुन्।
रोइस नामा चकलेट २० पिसको प्याकेटको ८०० येन जति पर्छ। ध्यान दिनु पर्ने कुरा के छ भने यो चकलेटको एक्स्पाइरी डेट करिब १ महिनाको छोटो अबधी हुन्छ। त्यसैले यो चकलेट घर फर्किदा एरपोर्टमा किन्दा राम्रो हुन्छ। अर्को कुरा यो चकलेट साधारण स्टोरमा पाइने चकलेट जस्तो हुन्न। यो चकलेटलाई १० डिग्री सेल्सिअस तल स्टोर गरिन्छ। त्यसैले रूम टेम्पेरेचरमा यो पग्लिन्छ। प्लेनको यात्रा लामो छ भने एरपोर्टको चकलेट किनेको स्टोरमा आइस प्याक पनि माग्न नबिर्सिनु होस्। खासमा भन्नु पर्दा ति स्टाफले हजुरलाई आइस प्याक लिनुहुन्छ भनेर सोध्ने छन्।
३. ज्यागा पोकुरु
होक्काइदोको अर्को पपुलर स्न्याक्स र मेरो पर्सनल बेस्ट चाही ज्यागा पोकुरु हो। यो सेभरी (नुनिलो) स्न्याक्स मनपराउनेहरुको लागि छुटाउनु नहुने कोसेली हो भन्दा फरक पर्दैन। ज्यागा पोकुरु पोटेटो चिप्स र फ्रेन्च फ्राईज को मिक्स्ड प्रोडक्ट जस्तै हो। अनि जापानको ड्युटी फ्री सपको बेस्ट सेलिङ्ग प्रोडक्ट पनि। सुरु चोटी खादा त मैले यो आलुबाट बनेको हो भनेर विश्वास पनि गर्न सकिन। देख्दा फ्रेन्च फ्राईज जस्तो चिज त्यस्तो क्रंची के गरि हुन्छ भनेर अचम्म लाग्नेछ। अनि त्यो नुनिलो फ्लेभरले ज्यागा पोकुरुले जसलाई पनि आफ्नो फ्यान बनाउछ। यो १०० % होक्काइदोको आलुबाट बनाइन्छ अनि त्यसमा सिजनिङ्ग गरिने रोस्टेड साल्ट चाहि ओखोत्स्क प्रान्त बाट लिएर आइन्छ। यति सम्म कि अलिकति बिग्रेको आलु प्रयोग गरिदैन अनि ओरिजिनल स्वाद को लागि आलु को बोक्रा पनि तासिएको हुदैन।
सन् २०१७ मा जापानमा आलुको अभाव हुने हल्ला चल्दा मानिसहरु आलु स्टक राख्न छोडेर ज्यागा पोकुरुको स्टक राख्न थालेका थिए। ज्यागा पोकुरु दुई साइज को प्याकेटमा पाइन्छ – ६ पिसको १० पिसको प्याकेट। १० पिसको प्याकेटको १००० येन पर्छ र यो नै धेरै लोकप्रिय देखिन्छ। तर दुखको कुरा ज्यागा पोकुरु धेरै भन्दा धेरै मानिस ले किन्न सकुन भनेर प्रति व्यक्तिले १ वा २ प्याकेटभन्दा बडी किन्न नमिल्ने क्याप लागिएको हुन्छ। यो क्याप ज्यागा पोकुरुको माग बढी भएकोले सर्टेज नहोस भनेर लगाईएको हो।
४. टोकियो बनाना
बनाना केक यति क्युट देखिन्छ भनेर कसैले सोचेको थिएनन् होला। टोकियो बनाना यसको मिनिओन जस्तै आकारले गर्दा सजिलै चिनिन्छ। यो टोकियो को सुपरमार्केट वा एरपोर्टमा सजिलै पाइन्छ । यो ६ फ्लेबरमा उपलब्ध छ। त्यसमा मेपल, बनाना सेक, चकलेट बनाना क्रिम लगायत छन्। टोकियो स्काई ट्रीमा चाही त्यहाँ बाहेक अन्त कतै किन्न नपाइने टोकियो बनाना पाइन्छ।
टोकियो बनाना ४, ८, १२ पिसको प्याकेटमा पाइन्छ। त्यसमा पनि ८ पिसको प्याकेट धेरै जसो देखिन्छ। त्यसको मूल्य १००० येन पर्छ। यो कोसेलीको नराम्रो पक्ष भनेको यसको एक्स्पाइरी डेट ७ दिनको मात्र हुन्छ। त्यसैले यो कोसेली फर्किने बेला एरपोर्टमा किन्दा राम्रो हुन्छ। यो बनाना आफुले मनपराउने व्यक्तिलाई दिने चलन जापानमा देखिन्छ। प्रेमीहरु माझ यो कोसेली लोकप्रिय हुनुको कारण यसको क्युट आकारनै हो।
५. जापानिज किट क्याट
जापानिज स्न्याक्सको लिस्टमा किट क्याट परेन भने त्यो लिस्टलाई क्रेडिबल मान्न सकिन्न। किट क्याट को जन्म ईङ्ग्ल्याण्ड को योर्क सहर मा भएतापनि जापानले त्यसलाई नया स्वाद दिएको हो। सानो भन्दा सानो स्टोरमा पनि कमिमा ४/५ फ्लेबरका किट क्याट पाइन्छ। फुड रिपब्लिकको अनुसार जापानमा २०० फ्लेबरका किट क्याट बनेका छन्। ती फ्लेबरहरु सिजन अनुसार फरक हुन्छन अनि एउटा सिजन मा पाइने अर्को सिजन मा नपाइन सक्छन।
सबैखालको फ्लेबर चाख्न हजुरले जापान पुरै घुम्नुपर्ने हुन्छ। किनकि कुनैकुनै फ्लेबरहरु त्यो ठाउँमा भन्दा अन्त पाईदैन। केहि पपुलर फ्लेबर मा ग्रीन टि, स्ट्रबेरी चिजकेक, एप्पल भिनेगर, स्विट पोटेटो, वासाबी, साकुरा, चोको बनाना, लेमोन, स्विट कन र ग्रेप हुन्। जुन फ्लेबरको खाएपनि लोभ्याउन सक्ने किट क्याट को विशेषता हो। १२ पिस प्याकेट किट क्याटको मूल्य फ्लेबर हेरेर फरक हुन सक्छ। ३०० येन देखि ८०० येन पर्ने यी कोसेली घर फर्किने बेला लान नछुटाउनु होला। तपाईका प्रियजनहरुले मिठो मात्र हैन अचम्म मान्नेछन।